RASMI: Koox Faransiis Ah Oo Shaacisay Inay Wada-hadallo La Gashay Karim Benzema Iyo Caqabad Soo Dhex-gashay – Cadalool.com
RASMI: Koox Faransiis Ah Oo Shaacisay Inay Wada-hadallo La Gashay Karim Benzema Iyo Caqabad Soo Dhex-gashay
Karim Benzema ayaa looga gacan haadinayaa inuu dib ugu laabto waddankiisa Faransiiska, halkaas oo ay uga imanayaan dalabyo, isla markaana ay haddaba mid ka mid ah kooxaha tunka weyn ku dhawaaqday inay kula jirto wada-hadallo hal caqabad ahi haysato.
Beznema ayaa Real Madrid yimid sannadkii 2009 iyadoo lacag dhan 30 milyan oo Euro kaga soo iibsatay Lyon oo uu ahaa udub-dhexaadkeeda, waxaana intii uu joogay Los Blancos uu kula guuleystay Afar Champions League, laba LaLiga iyo Laba Copa del Rey, waxaanu kaalinta lixaad kaga jiraa liiska ciyaaryahannada ugu goolasha badan taariikhda Real Madrid.
Xagaagii tegay, koox Faransiis ah ayaa ka shaqaysay sidii ay usoo afjari lahayd waayaha Karim Benzema ee garoonka Santiago Bernabeu, balse warbaahintu ma ogaanin.
Markii uu Zinedine Zidane iska casilay tababarenimada Real Madrid, isla markaana uu Cristiano Ronaldo ka dhaqaaqay, waxa isaguuna liiska bixitaanka kusoo biiray Benzema oo ugu dambayn hal caqabad ah uga baaqday tegistiida.
Kooxda kubadda cagta Lyon ee uu hore ugu ciyaari jiray, ayaa dalab ay dib ugu ceshanayso soo hor-dhigtay, sida uu xaqiijiyey Madaxweynaha kooxdaasi.
“Dabcan way qurux badnayd inaanu dib usoo celino. Waxaanu wada-hadalnay xagaagii hore sababtoo ah wuxuu ka fikirayey inuu tago, laakiin dhaqaale ahaan ayaanu awood ugu weynay. Waanu isku daynay inaanu wax walba samayno anagoo kaashanayna wakiilkiisa laakiin may dhicin.” Sidaa waxa yidhi Madaxweynaha Lyon, Jean-Michel Aulas oo u warramay wargeyska Tout le Sport.
Warku wuxuu sheegay in Benzema uu markii dambe go’aansaday inuu sii joogo Bernabeu oo aanu cidlaynin mar haddii uu ka tegay Cristiano Ronaldo, isla markaana uu noqdo hoggaamiyaha, taas oo dhaxalsiisay inuu xili ciyaareedkan dhaliyo 22 gool.
Qorshaha Lyon ayaa yimid markii ay Real Madrid dib uga soo ceshatay weeraryahanka Mariano Diaz oo 23 milyan oo Euro ay kasoo bixisay, laakiin Aulas ma sheegin in wada-hadalkii labada kooxood uu qayb ka ahaa Karim Benzema.